Forum serasera malagasy Namana vaovao miarahaba anareo namana rehetra. ... - Dinika forum.serasera.org
Namana vaovao miarahaba anareo namana rehetra. ...
Fitohizan'ny hafatra : Namana vaovao miarahaba anareo namana rehetra. ...
ZAKAIOSY - 24/07/2013 00:06
Namana vaovao miarahaba anareo namana rehetra.
Misy aingam-panahy manitikitika ahy ao anatiko, toa te hivoaka ho tononkalo kanefa tsy mety mivoaka, inona no torohevitra azonareo omena ahy ? Na izany aza efa nahasoratra tononkalo 5 aho. Misy lalanan'ny zon'ny mpanoratra ve ho an'ireo izay mamoaka ny tononkalony eto sns...Manan-joky izay tena mahay manoratra tokoa aho, efa manana tononkalo 50 any ho any, efa nandresy lahatra azy aho ny hamoahana azy ireo ho boky fa tsy mety izy, mba toroy hevitra aho handreseko lahatra azy bebe kokoa. Misaotra
hery - 24/07/2013 07:54
Momba ny aingam-panahinao, tonga dia mandraisa taratasy sy penina dia manorata. Aza eritreretina be loatra ny rima sns. Izay tsy mivoaka dia dingano, izany hoe midina andalana mandra-pahita ny tohiny. Dia avy eo ivereno vakiana sy fenoina. Izay tay mbola tonga dia dingano foana. Apetraho kely amin'izay avy eo dia manaova zavatra hafa mandritra ny minitra maromaro. Ivereno amin'izay, vakio sy ahitaio ary fenoy.
Momba ny an'ny zokinao. Aza terena hamoaka boky izy raha mbola tsy vonona. Misy manana tononkalo maherin'ny 100 ato nefa tsy mamoaka boky. Asaivo ampidiriny ao amin'ny http://vetso.serasera.org raha tiany hovakian'ny namana aloha vao havoaka boky. Mety manome herizaika koa ny mahita ny fitiavan'ny namana hafa ny tononkalo.
andrywui - 27/07/2013 20:34
O RAZAKAIOSY A , raha tsy de olana de mbo omeo amzany tonokalo efa bobaka be zany za fa asiko feoany ee nenah ny feony bobaka fa ny tonony tsisy !!... sa omena otrinn razakaiosy ?? nareo manko somary tia vola zay ,, raha mbola tsy nisy nanao oe avia hanaraka ahy !!
ZAKAIOSY - 27/07/2013 21:39
Voaray ny hetahetanao ry Andrywui, ilay zokiko no manana tononkalo betsaka hoy aho fa ny ahy mbola 5 ihany, ny azy tsy asehosehony afa-tsy izay vitsivitsy tiany haseho ihany, fa izahay mpiray tampo aminy no nangalatra nitsirika ny fanafenany azy ka nahitanay fa hay efa marobe izy tao. Ny ahy indray dia azoko omena atao tononkira ny 1 raha mety. Zahay tsy hoe "somary tia vola", zahay tsy mivavaka @ vola sy harena, saingy araka ilay lazain'i Tselonina hoe "Izaho tsy mahantra fa sahiran-dava".
andrywui - 28/07/2013 00:10
ok razaka a ! alefaso aty ary le tonony fa asiko feoany sy tonga de hiraiko de averiko any aminao apres une semaine vita mix remix mastering compresseur e ataoko souvenir ho anao de raha tinao asina feoany sy apiakanjoina izy rehetra de mikozy apres !! serieux io a
ZAKAIOSY - 29/07/2013 18:57
Ndao andramana ary e, aiza moa izany no soratako ilay izy, mila miditra ho isan'ny "mpanoratra" na "poeta" aho izany ve dia avy eo vao mampiditra ilay tononkalo, gasy vao tonga eto aho ka mbola tsy haiko ny tena fandehany.
andrywui - 01/11/2013 13:32
alefaso amle oe handefa hafatra io razaka a
jereo le menu eo amin'ny sisiny ireo